Haddii aad ku cusub tahay WIC, fadlan ku billow inaad daawato fiidiyowga hoose. Haddii aad u baahan tahay inaad la xiriirto shaqaalaha WIC, fadlan isticmaal 'Raadi rugta WIC"Dooro barnaamijka ama wac Khadka Caafimaadka Qoyska 1-800-755-GROW (4769). Miyaad dhibaato ka haysataa appka? Email JPMA at WICShopper@jpma.com
Maskaxda ku hay in WICShopper aan ku baari karin miraha iyo qudaarta cusub iyo mararka qaar dukaamada isticmaalaan baakayaalkooda gaarka ah oo aan ku jirin liiska alaabooyinka la ansixiyay. Si kastaba ha ahaatee, oo dhan gebi ahaanba, ka hor intaan la jarjarin, la jarjiray ama shakhsi ahaan shaqeynaya iyada oo aan lahayn suugo ama dips waa la ogol yahay. Waxaa jira xeerar kale, markaa tixraac liiska cuntadaada ee barnaamijka wixii faahfaahin dheeraad ah.
Q: Xagee ka helaa Manfacyada WIC?
A: Nasiib darro, weli suurtagal maaha WICShopper inay soo dejiso faa'iidooyinkaaga WIC. Waxaan rajeyneynaa inaan ku darno tilmaantan mustaqbalka dhow. Ilaa waqtigaas, waxaad isticmaali kartaa "Caawinta faa'iidooyinka"Muuqaal lagu sawirayo sawirada WIC balansiga risiidhkaada. App wuxuu had iyo jeer ilaalin doonaa sawirkii ugu danbeeyay ee la qaaday, markaa ha ilaawin inaad cusbooneysiiso sawirka xiga markaad dukaanka.
Marka gargaarkaaga cuntada uu ku dhajiyo kaarkaaga, waxaad isla markiiba dukaanka ku gadan kartaa. Gargaarka Cunnada wuxuu dhammaanayaa maalinta ugu dambaysa ee bil kasta oo aan ku soo laaban bisha xigta.
Hubi dheelitirka faa'idooyinka cuntada ee WIC ee ku yaal rugtaada WIC ama qayb kasta ee dukaanka cuntada dukaanka ee aqbala WNC. Kaarkaaga u geli akhristaha kaadhka oo ku qor Nambarka Aqoonsiga Shakhsiyeed (PIN) si aad u hesho dheelitirka faa'idadaada.
A: Qaado aqoonsigaaga aqoonsiga ee ku yaal rugta caafimaadka ee WIC bixiyaha isla markiina u sheeg! Waxaa jiri doona mudo sugitaan ah ka hor inta aanad helin kaarka lumay, la xaday ama la bedelay.
A: Cuntadaada WIC ayaa laguugu dhejin doonaa WNC-ga inta lagu jiro booqashada rugta caafimaadka. Marka rugta caafimaadku kuugu cusbooneysiiso cuntadaada WIC kaarkaaga, waxaad isla markiiba dukaanka ku gadan kartaa. Markaad iibsato cuntooyinkaaga WIC, waxaa lagaa saari doonaa dheelitirka cuntada ee kaarkaaga.
A: Waxaad isticmaali kartaa "Howlaha Qaadashada" ee WICShopper qabashada sawir aad ka heshay biilka eWIC-gaaga mar kasta oo aad dukaan ku dukaameysid. Waxa kale oo aad ka hubin kartaa dheelitirka rugtaada WIC iyo miiska adeegga ama dukaamada.
A: WNC waa la isticmaali karaa. Badbaadi WNC-gaaga oo u qaado ballantaada WIC ee soo socota si aad u hesho cuntooyinkaaga cusub ee lagu raro.
Waxyaabaha lagu baari karo ee barnaamijka WICShopper si loo hubiyo inay yihiin WIC uqalma. Xasuuso in aad xaqiijiso in aad dhab ahaantii leedahay faa'iidooyinka si aad u iibsato sheyga!
A: App-ka lama baari karo miraha cusub iyo khudradda iyo mararka qaarkood dukaamada ay isticmaalaan baako u gaar ah. Si kastaba ha noqotee, dhammaantiis, ka hor intaan la jarjarin, la jarjiray ama shakhsi ahaan shaqeynaya iyada oo aan lahayn suugo ama dips waa la ogol yahay. Waxaa jira xeerar kale, markaa tixraac liiska cuntadaada ee barnaamijka wixii faahfaahin dheeraad ah.
Khasnajigu wuxuu kuu sheegi doonaa goorta ay nabdoon tahay inaad kaarka ka qaadato kaarka akhristaha dhamaadka macaamilkaaga. "Haa" si aad u aqbalo macaamilka WIC ama "Maya" si aad u diido. Wax isbedel ah lama sameyn karo markaad riixdo "Haa".
Ha iibin, iibin ama ha siin PIN ama kaarkaaga. Isticmaalidda faa'iidooyinka WIC waa dembi.